indoor bracket musuwo Fekitori | China indoor bracket musuwo Vagadziri, Vatengesi
14W 28W 18W bracket mwenje ine reflector
Chitarisiko chePatent, dhairekitori, muridzi wemwenje uchishandisa kucheka uye kutenderera, kuomesa mhete mhete, yakachengeteka uye yakavimbika. Iyo mwenje inobata inotora imwechete musoro mwenje mubati, 250V, mhando yepamusoro murazvo unodzora mainjiniya epurasitiki, yakakwira michini simba, radial propulsion rotary mhando, yakanaka yekutaurisa mashandiro. Inokodzera kuvhenekerwa kwewadhi, imba ye laboratori, musangano wepamusoro-wakachena musangano, nezvimwe.
Kirasi 1 14W 18W 28W inverted fuji bracket mwenje
Patent chitarisiko, inoverengeka dhizaini, mwenje mubati uchishandisa kucheka uye kutenderera, yakachengeteka uye yakavimbika. Iyo mwenje inobata inotora imwechete musoro mwenje mubati, 250V, mhando yepamusoro murazvo unodzora mainjiniya epurasitiki, yakakwira michini simba, radial propulsion rotary mhando, yakanaka yekutaurisa mashandiro. Inokodzera kuvhenekerwa kwewadhi, imba ye laboratori, musangano wepamusoro-wakachena musangano, nezvimwe.
guruva risina simba rakasimba 14W 28W 35W prism inovhara bracket mwenje
Chitarisiko chePatent, chimiro cheinovhura, chinobata mwenje uchishandisa kucheka uye kutenderera, kuomerera mhete yekubata, yakachengeteka uye yakavimbika. Imwe chete mwenje mwenje mubati, 250V, yepamusoro murazvo retardant mainjiniya epurasitiki, yakakwira michini simba, TOUR propulsion muhombe mhando, yakanaka yekutaurirana kuita. Iyo tambo yechiedza yeiyo prism bracket yakapfava uye yakagadzikana, iine hunhu hweguruva rakadzika uye kutaridzika kwakanaka, inokodzera chiitiko cheakakwira mwenje zvinodiwa.
Mvura-chiratidzo chinonyorova-chiratidzo chetatu-chiratidzo bracket mwenje
Mwenje inofananidzwa neIP65 kirasi. Isina mvura, hunyoro-chiratidzo, guruva-chiratidzo chisimbiso dhizaini, inonzwisisika chimiro, yakanaka uye nerupo, kukiya dhizaini yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika, nyore kuisa nekuchengetedza. Imwe chete mwenje mwenje mubati, 250V yemhando yepamusoro murazvo unodzora mainjiniya mapurasitiki, yakakwira michini simba, dhayamita uye kukwirira ichifambisa rotary mhando, yakanaka yekuita mashandiro. Novel dhizaini, compact dhizaini, runako chitarisiko, nyore kuisa nekuchengetedza, kukurumidza kutanga-up. Iyo inokodzera nzvimbo dzekunze nedzokunze dzisina mvura, guruva-chiratidzo uye unyoro-chiratidzo chinodiwa.